Ianao ve dia tonga lafatra, realista, na mpandala ny aina ve? (Quiz) - Fialamboly Fotsiny
Ianao ve dia tonga lafatra, realista, na mpandala ny aina ve? (Quiz)
Mety hieritreritra ianao fa mahalala ny valin'ity fanontaniana ity, saingy tsy dia mora araka ny hita. Isika rehetra dia samy manana ny singa ao anatiny ao amintsika, ary miakatra tampoka izy ireo indraindray na rehefa mila izany ny filàna. Na izany aza, mety misy hery manjaka iray izay mamolavola ny fahitanao an'izao tontolo izao matetika.
Ny mpandala ny tonga lafatra dia manana maso fatratra amin'ny antsipiriany ary matetika dia hahatsikaritra zavatra tsy azon'ny sasany. Tena halany tanteraka ny manao fahadisoana ary mety hanandrana sy hisoroka ny mety hisian'ny tsy fahombiazana izy ireo raha azony atao. Tsy dia mahay mijery zavatra avy amin'ny fomba fijery misimisy kokoa izy ireo, mifidy, fa hifantoka amin'ny olana manokana na hetsika mitokana.
Ny realista dia mirona hisoroka ny faran'izay tsara sy ratsy, ka aleony mahita an'izao tontolo izao. Manana saina siantifika izy ireo, miantehitra amin'ny dingan'ny lojika hamaritana ny hetsika tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy. Na dia manana lafiny ara-pientanam-po tsara aza izy ireo, dia tsy avelany hitarika na hifehy azy ireo loatra.
Manaiky ny tsy azo antoka fa ny tontolo manodidina azy ireo dia mety tsy ho toy ny nisehoany voalohany. Ho azy ireo, ny tsipika misy eo anelanelan'ny zavatra misaraka dia matetika manjavozavo ary inoana kokoa ny hinoany hery toy ny finoana, ny lahatra, ny fifanandrifian-javatra ary ny serendipity. Azo inoana fa fanahy mamorona sy mpamorona sary an-tsaina izy ireo izay mahalana vao mahita ny fahagagana amin'ny fiainana.
Raha manontany tena ianao hoe iza amin'ireto no matetika voafehy ao an-tsainao, andramo ity quiz ity izay hanontany anao andian-fanontaniana izay natao hahitana.
Inona no vokatrao? Toa mifanaraka amin'ny eritreritrao ve izany? Mametraha hevitra etsy ambany ary ampahafantaro anay.
Azonao atao koa ny mankafy an'ireto quizs ireto:
Iza amin'ireo karazana enneagram olona ianao?
Ity fitsapana sary tsy mitombina ity dia hamaritra ny toetra maha-olona anao
Inona no mampientanentana ny sainao?
banky sasha ary romana no manjaka
ny fomba hialana ary hanombohana indray
vola amin'ny ora banky
tia tena ny lehilahy ary tsy mandinika
telo heny vs randy orton
ny fomba hisokafana amin'ny mampiaraka